हात्ती दुब्लाएर बाख्रो हुँदैन, कोही चोइटिएर जाँदैमा एमाले सिद्धिदैन : केपी ओली [अन्तर्वार्ता] — Moon Light Khabar
हात्ती दुब्लाएर बाख्रो हुँदैन, कोही चोइटिएर जाँदैमा एमाले सिद्धिदैन : केपी ओली [अन्तर्वार्ता]
लामो समयको अन्तरसंघर्षपछि नेकपा ( एमाले) अन्ततः विभाजित भएको छ। बुधबार एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एमाले समाजवादी पार्टी गठनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएसँगै एमाले औपचारिक रुपमा विभाजित भयो।
यसअघि नेपाललाई साथ दिँदै आएका स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले विभाजनमा साथ दिएनन्। उनीहरु अहिले केपी ओली नेतृत्वको एमालेमा पनि सामेल भएका छैनन्। यसअघि कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने ओलीले सुनिश्चित गरे एकता प्रक्रियामा सहभागी हुने उनीहरुको मनस्थिति छ।
अध्यक्ष ओलीको दम्भ र अहंकारले गर्दा अर्को पार्टी बनाउनुपरेको नेपाल पक्षको दाबी छ। तर, ओलीले भने यसको प्रतिवाद गरेका छन्। उनले कोही चोइटिएर जाँदैमा एमाले नसिद्धिने दाबी गरेका छन्। एमाले विभाजन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसँग न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी :
अहिले एमाले विभाजन भएको हो कि टुक्रिएको हो ? माधव नेपाल समूह बाहिर जाँदा तपाईंहरूलाई ‘कुचोले बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडायो’ भन्ने लागेको हो ?
यो विभाजन होइन। टुक्रिएको हो। एमाले चोइटिएको हो। केही मानिस पार्टीबाट अलग भएको हो। पार्टी एक बनाउन यसबीचमा मैले कोसिस नै गरेन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यो गलत हो। मैले कम्युनिस्ट एकीकरण नै २०३१ सालमा सुरु गरेको थिएँ। २०३१ सालमा कोर्डिनेशन केन्द्र हुँदै एकता भएर नेकपा माले २०३७ सालमा बनेको थियो।
त्यसपछि यो क्रम मेरै नेतृत्वमा निरन्तर रहँदै आएको र मेरै नेतृत्वमा एकता हुँदै आएको थियो। माओवादी पार्टीलाई पनि मैले मेरै नेतृत्वमा एकीकृत गराएको थिएँ। झण्डै दुई तिहाइ भएको थियो। यसरी सुरुदेखि नै एकताको काम गरेको मानिस भएकाले अहिले कोसिस गरेन भन्नु पूर्वाग्रही आरोप हो।
अकारण र पार्टीभित्र नचाहिँदो अस्थिरता सुरु गरेका कारण केही साथीहरु चोइटिनु भएको हो। मैले पार्टीभित्रबाटै सरकारको कूप्रचार हुदाँसम्म सहेर एकताको प्रयास गरेको थिएँ। आफ्नो सरकार ढाल्न मत दिन नआउने र संसद् जोगाउँदा भन्दा विश्वासको मत नदिने हुँदा समेत प्रयास भएको थियो। राष्ट्रपतिकहाँ हस्ताक्षर लगेर गन्तव्यहीन सरकार बनाएर अस्थिर सरकार बनाइँदा पनि मैले सहेको थिएँ।
मुद्दा हालेर एमालेको सरकार गिराएर अदालतबाटै परमादेश जारी गरेर नेपाली कांग्रेसको सरकार बनाउँदा पनि कार्यदल बनाएर भेटेर फोन गरेर प्रयास मैले गरेको हो। म कोही पनि मानिसले बाटो नविराओस् भन्ने चाहेको चाहन्थेँ। सत्यको मार्ग म त अवलम्बन गर्छु र अरुले पनि गरोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसैले यो आरोप अनुचित हो।
भन्ने एकथोक गर्ने अर्को थोक भनेर तपाईंमाथि आरोप लगाउने गरिएको छ। तपाईंको दम्भका कारण पार्टी विभाजन भयो भनिन्छ नि ?
मसँग तपाईंले दम्भ देख्नु भयो ? माधव नेपालले त अर्घेल्याइँ गर्ने हो, गर्नु भएको छ। मैले विपक्षीसँग मिलेर पार्टीलाई घात गरेको छु र ? माधव नेपालले विपक्षीसँग मिलेर घात गरेको त खाली आँखाले देखेका छौं नि। यति हुदाँ हुँदै अरु भन्न पर्छ र ? मैले पार्टी चलाउन दम्भ देखाएको हुने अनि आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने राम्रो हुने त पक्कै होइन।
पार्टी अध्यक्ष हुनुको नाताले अपसजसको भारी त बोक्नु पर्ला नि ?
राजनीतिमा पक्ष विपक्ष भन्ने हुन्छ। भारतमा महात्मा गान्धीलाई गोली हानियो। सुकारातलाई विष खुवाइयो। मार्टिन लुथरकिङलाई के गरियो भन्ने हेर्नुपर्छ। विपक्षीले आरोप र झुटो लाञ्छना लागाउने गर्छन्। महाभारतमा भीमसेनले सजिलै दुर्योधनलाई जित्थे भने यहाँ हान भनेर कृष्णले इशारा गर्न जरुरी थिएन होला।
कमजोरले यस्ता झेल खेल्ने हो। सहजै जित्नेले यसो गर्दैन। निष्ठाको राजनीति गर्नेले यस्तो खेल्दैन बरु हार्छ। निष्ठासँग खेल्नेले अन्ततः जित्छ। माधव नेपाललाई मैले पटक पटक भेटौं भनेँ तर, भेट्न मान्नु भएन। २ वर्ष भयो उहाँले फोन गर्नु भएको छैन। मैले नै गरेको छु। मैले प्रधानमन्त्री भएर पनि उहाँले भनेको ठाउँमा गएर भेटेको छु। हामी एउटा धुव्रका दुई चुम्बक झैं भएका छौं। माधव नेपाललाई त्यहाँबाट चुडाउने बलियो शक्ति लागेका कारण उहाँ छुट्टिनु भएको होला।
विभाजनको मुख्य कुरा पार्टीको अन्तरकलहले हो कि अरु नै कारण छन् ?
यो दुईथरीबाट सुरु भएको पार्टी कलह होइन। माधव नेपालको मात्र चाहना हो। हामीले कहिँकतै केही गरेका छैनौं। ममाथि बोली कडा भन्ने आरोप होला। पार्टीका विरुद्ध प्रहार भएपछि बोल्न पर्ने भयो बोले। देशलाई अस्थिरतामा जाने र विकासमा लाग्नुपर्नेमा अन्यत्र लाग्नुपर्ने भएपछि गाली निस्कन्छ। यो स्वभाविक हो। अहिले बजेटको काम रोकिएको छ।
पुँजीगत खर्च सुरुदेखि नै होस् भन्ने हामीले चाहेका थियौं। मंसिरबाट सुरु भएर साउन पुग्दा फ्रिज हुने अवस्था अन्त्य गर्ने हाम्रो चाहना थियो। अहिले कर्मचारीलाई तलब दिने बाहेक अरु काम हुने अवस्था छैन।
अहिले सरकार अरुको पार्टी भत्काउन र विगार्ने काममा मात्र लागेको छ। अहिले विरोध गर्नै हुँदैन। हिजो विद्यार्थीमाथि कसरी प्रहार गरिएको छरु ती विद्यार्थी हाम्रा भाइबहिनी हैनन ररु म प्रधानमन्त्री हुँदा कहिल्यै यसरी प्रहार गरेको थिएन। विरोध प्रदर्शन गर्नै हुँदैन। दमन र प्रहार हुने कार्य सुरु हुन्छ।
सरकारले मैले ल्याएको भ्यासिक्न लगाउने हैनरु विकास निर्माण गर्नेतर्फ होइन सरकार देशलाई भिडन्ततिर अघि बढाउन अग्रसर रहेको छ। देशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक पार्टीले सरकार चलाएको छ तर, देश प्रचण्डपथमा अघि बढेको छ। यो जनविरोधी कार्य भयो नर्गनुस् भन्दा मिडियामा चर्को बोलेको भन्दिनु हुन्छ। मैले यथार्थ बोलेको हो।
प्रकाशित मिति : २०७८ भाद्र ३, बिहीबार